भोलि कार्तिक २८ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल ! – List Khabar
Home / जीवनशैली / भोलि कार्तिक २८ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
भोलि कार्तिक २८ गते आईतबार, कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् भोलिको राशिफल !
admin November 13, 2021 जीवनशैली Leaveacomment 291 Views
दिन अनुकूल रहनेछ । तपाई तन-मनले स्वस्थ रहनुहुनेछ जसकारण कार्य गर्न उत्साह एवम् उर्जा अनुभव गर्नुहुनेछ। परिवारसँग आनन्द एवम् उल्लासमय समय बित्नेछ। आमाबाट लाभ मिल्नेछ । मित्र एवम् आफन्तबाट घरको वातावरण प्रफुल्लित रहनेछ ।
हुनेवाला घटनाले चिन्तित रहनुहुनेछ । स्वास्थ्य खराब हुँदा र आँखामा कष्ट हुनेछ । आफन्त एवम् परिवारसँग रुखोपनको सामना गर्नुपर्नेछ। शुरु गरिएको कार्य अपूर्ण रहनेछ । खर्च अपेक्षाभन्दा अधिक हुनेछ र परिश्रम गर्दापनि सफलता मिल्नेछैन।
दिन लाभदायी रहेको छ । अविवाहित को योग्य जीवनसाथी पाउनेछन् । धन प्राप्त हुने शुभ दिन रहेको छ । मित्रबाट अचानक भएको भेट आनन्ददायी रहनेछ । मित्रबाट लाभ हुनेछ । परिवारमा भाई एवम् पुत्रबाट लाभ मिल्नेछ । स्त्री मित्रबाट लाभ हुनेछ एवम् सन्तान पक्षबाट शुभ समाचार मिल्नेछ ।
दिन तपाईको लागि सानुकूल रहेको छ । हरेक काम सरलतामा सम्पन्न हुनेछ। पदोन्नतिको योग रहेको छ । उच्च अधिकारीको साथसाथै महत्त्वपूर्ण कुराको चर्चा-विचारणा हुनेछ । परिवारसँग मुक्त मनले कुराकानी गर्नुहुनेछ । घरको सजावटमा रुचि लिएर केहि नयाँ गर्नुहुनेछ। कार्य सन्दर्भमा बाहिर जानुहुनेछ । आमासँग सम्बन्ध राम्रो रहनेछ ।
दिन मध्यम फलदायी रहनेछ । पूर्वनिर्धारित काम तर्फ प्रयास रहनेछ । व्यवहार न्यायपूर्ण रहनेछ । धार्मिक एवम् मांगलिक कार्यमा व्यस्त रहनुहुनेछ । धार्मिक बसाईको आयोजना हुन सक्ला । रिसको मात्रा अधिक रहनेछ। विदेशमा रहने आफन्तबाट समाचार मिल्नेछ । सन्तान एवम् व्यापारको समस्याको कारण मन अशान्त रहनेछ ।
नयाँ कार्य आरम्भ नगर्नुहोला । स्वास्थ्यको ध्यान राख्नुहोला र बाहिरको खानेकुरा नखानुहोला । तपाईको क्रोधको मात्रा अधिक रहनेछ ।परिवारसँग उग्र चर्चाको कारण मनमुटाव होला ध्यान राख्नुहोला । पानीबाट टाढा रहनुहोला ।
दिन आनन्दमा बित्नेछ । दिन राम्रो र प्रियतमको संगतमा आनन्द मिल्नेछ । मित्र एवम् प्रियजनलाई आनन्द महसुस गराउनु हुनेछ । नयाँ वस्त्रको खरिद गर्नुहुनेछ । तनमनको तन्दुरुस्ती रहनेछ । मान-सम्मान वृद्दि हुनेछ ।
घरमा सुख-शान्ति र आनन्द मिल्नेछ । शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्य शुभ रहनेछ ।बिरामी व्यक्तिको स्वास्थ्यमा सुधार हुनेछ । प्रतिश्पर्धी एवम् शत्रुबाट विजय प्राप्त गर्नुहुनेछ ।स्त्री मित्रसँग भेट हुनेछ । माईतबाट समाचार आउनेछ ।
सन्तानको स्वास्थ्य एवम् अभ्यास सम्बन्धित चिन्ताले मन व्याकुल रहनेछ । कार्य सफलता नमिल्नाले निराश रहनुहुनेछ । साहित्य एवम् कलामा रुची रहनेछ । बौद्दिक चर्चाबाट टाढा रहनुहोला ।
मन-स्थिति र स्वास्थ्य केहि राम्रो रहनेछ । परिवारमा झगडामय वातावरणले मन खिन्न रहनेछ । शरीरमा स्फूर्ति एवम् प्रफुल्लताको अभाव रहनेछ ।निन्द्राको अभाव रहनेछ ।मानहानी हुनेछ । मानसिक आवेग र प्रतिकुलतामा वृद्दि हुनुको साथसाथै व्यग्रतापूर्ण दिन बित्नेछ ।
मानसिक रुपले हल्कापन महसुस गर्नुहुनेछ । मनमा छाएको चिन्ताको बादल हट्नाले तपाईको उत्साह वृद्दि हुनेछ । समय आनन्दपुर्वक बित्नेछ । मित्र एवम् आफन्तसँग भेट हुनेछ ।प्रतिश्पर्धीले विजय प्राप्त रहनेछ । वैवाहिक आनन्दको अनुभूति रहनेछ ।
तपाईको खर्च हुनेछ । रिसलाई ध्यान राख्नुहोला । पैसाको लेनदेनमा सावधान रहनुहोला । शारीरिक तथा मानसिक स्वास्थ्य मध्यम रहनेछ । परिवारसँग मनमुटाव हुनेछ । नकारात्मक विचारलाई मनमा नराख्नुहोला ।
Previous यो झारलाई चिन्नु हुन्छ ? जसले दिन थाल्यो मासिक ५० हजार सम्मकाे कमाई, कसरी कमाउने सकिन्छ त !
Next अहिलेको जनगणनामा बाहुनको सँख्या बढ्यो भने तथ्याङ्क विभागमा आ’गो लगाईदिन्छौ – आङकाजी शेर्पा (भिडियोसहित)